लगानी गरेर पनि नाफा लैजादैनन् लगानीकर्ता!
तपाईँले कुनै व्यवसाय गर्नुभयो वा अन्य कम्पनीहरुमा लगानी गर्नुभयो भने पक्कै पनि पहिले हिसाब गर्नुहुन्छ कि त्यसबाट रिटर्न अर्थात प्रतिफल कति आउँछ? पुँजी लगाए अनुसारको रिटर्न पाउने भएमा मात्रै लगानी गर्नुहुन्छ। नोक्सान पर्ने वा प्रतिफल नलिने उद्देश्यले कसैले पनि लगानी गर्दैन।
कम्पनीहरुको सेयरमा लगानी गर्दा पनि त्यसबाट पाउन सकिने प्रतिफलका लागि लगानीकर्ताले प्रतिसेयर आम्दानी र मूल्य आम्दानी अनुपातलाई राम्ररी केलाउने गर्छन्।
यद्यपी प्रतिफल केलाएर लगानी गरेका हजारौं लगानीकर्ताले वर्षौदेखि आफ्नो लाभांश लगेका छैनन्। लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा भएको रकमले यही कुरा जनाउँछ। सो कोषमा असार मसान्तसम्म ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको कम्पनी रजिष्टार कार्यालय प्रमुख गिताकुमारी हुमेगाईंले जानकारी दिइन्। यो रकम जम्मा ७ कम्पनीहरुको मात्रै हो। अन्य धेरै कम्पनीहरुले कोषमा रकम जम्मा गर्न बाँकी नै छ।
सबै कम्पनीहरुले कोषमा रकम जम्मा गर्ने हो भने कोषको आकार निकै ठूलो हुनेछ। विभिन्न कम्पनीहरुको सेयर किनेर सोवापत पाउने गरेको नगद लाभांश ५ वर्षसम्म पनि लगानीकर्ता लिन नआएपछि कोषमा रकम जाने गर्दछ। कोषमा नगएको तर कम्पनीहरुमै थन्किएको लाभांश रकम योभन्दा ठूलो छ। लाभांश नलगेका लगानीकर्तालाई लैजान भनेर ति कम्पनीहरुले सूचना जारी गरिरहेका छन्। लाभांशका लागि दावी नपरेपछि धेरै कम्पनीहरु सोही कोषमै रकम संकलन गर्ने तयारीमा छन्।
कोषको अध्यक्षमा कम्पनी रजिष्टार प्रमुख तथा सदस्यहरुमा नेप्से महाप्रवन्धक र धितोपत्र बोर्डका निर्देशक रहने गरेका छन्।
कहाँ जान्छ कोषमा जम्मा भएको रकमको व्याज ?
कम्पनी रजिष्टार कार्यालय प्रमुख हुमेगाईं संकलित रकमबाट प्राप्त व्याज कोषकै आवश्यक काममा खर्च हुने गरेको बताउँछिन्।
‘यो रकम अन्य कुनै क्षेत्रमा पनि परिचालन गर्न मिल्दैन, त्यसबाट आउने व्याज कोषकै काममा खर्च हुन्छ’ उनले भनिन्। यद्यपी अहिले पनि कोही लगानीकर्ता लाभांश दावी गर्दै आउँछ र कम्पनीले प्रमाणित गरिदिन्छ भने त्यो लाभांश लगानीकर्तालाई नै दिइने उनले स्पष्ट पारिन्।
जम्मा भएको रकमबाट आउने व्याज कोषकै काममा खर्च हुने बताइए पनि कोषको कार्यालय भने २४ सै घण्टा बन्द रहने गरेको छ। कम्पनी रजिष्टार कार्यालय भवनमै कोषको बोर्ड टाँगिएको छ। कोषमा कामै नहुने भएकाले कार्यालय बन्द रहने गरेको रजिष्टार कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए।
कोषमा जम्मा भएको रकम कुनै क्षेत्रमा परिचालन गर्न नमिल्ने भएकाले कोषमा काम पनि हुँदैन। यहाँसम्म कि कोषमा नयाँ पदाधिकारी आइसक्दा झुण्ड्याइएको बोर्ड समेत अहिलेसम्म फेरिएको छैन।
पदेन सदस्य रहनेगरी खडा गरिएको कोषमा प्रेमकुमार श्रेष्ठ सरुवा भई उनको स्थानमा हुमेगाईंले जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि नयाँ बोर्ड अहिलेसम्म बनाइएको छैन।
अर्कोतर्फ व्याज अनावश्यक दुरुपयोग हुने ठानेर ७ वटाबाहेक अन्य कुनै पनि कम्पनीहरुले अवितरित लाभांश कोषमा जम्मा गरेका छैनन्। व्याज रकम खाने उद्देश्यले नै कोष खडा गरिएको धेरै लगानीकर्ताको आरोप छ। कोषले पाएको व्याज रकम लगानीकर्ताको हितका अन्य काममा प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनीहरुको माग छ।
लगानीकर्ताको हितका नाममा खुलेका संगठनहरुले समेत व्याज रकमलाई लगानीकर्ताको हितमै सदुपयोग गर्ने विषयमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकेका छैनन्। सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्याल चाँडै नै यस विषयमा स्पष्ट कार्यविधिहरु बनाएर अघि बढ्ने बताउँछन्। ‘केही दिनमै स्पष्ट कार्यविधि बनाएर व्याज रकमबाट लगानीकर्ताको हितका लागि प्रयोग गर्नेगरी अघि बढिइन्छ’ उनले भने।
किन लगेनन् लगानीकर्ताले लाभांश?
संकलित भएको रकम धेरै लगानीकर्ताको थोरै थोरै रकम हो। लगानीकर्ताको बैंक खातामै नगद लाभांश जम्मा गरिदिने परिपाटी नहुँदा रकम कम्पनीहरुमै थन्किएको हो। त्यो पनि पाँच वर्षअघि काठमाडौं नै आउनुपर्ने वाध्यता थियो।
सम्वन्धित लाभांश लिन सम्वन्धित कम्पनीको बिक्री प्रवन्धककोमै जाँदा खर्च त्योभन्दा धेरै हुने भएकाले अधिकांशले लाभांश नलिएका हुन्। कतिपयलाई कम्पनीले दिएको लाभांशबारे जानकारी नहुँदा पनि यस्तो समस्या आएको सम्वद्ध अधिकारीहरु बताउँछन्।
पछिल्लो समयमा भने केही कम्पनीहरुले नगद लाभांश लगानीकर्ताकै खातामा जम्मा गरिदिन थालेका छन्। धितोपत्र बोर्डले सबै कम्पनीहरुलाई नगद लाभांश खातामै जम्मा गर्न निर्देशन दिए पनि सबै कम्पनीहरुले यसलाई पालना गर्न सकेका छैनन्।
यदी सबै कम्पनीले नगद लाभांश लगानीकर्ताको खातामै जम्मा गरिदिने हो भने, प्रत्येक लगानीकर्ता आफ्नो लगानीबाट लाभान्वित हुने थिए।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २७, २०७४, ०७:५७:०९